စာဖက်သူများသိ၇ှိစေ၇န် မကြာမီ၇က်အတွင်း မှာ နည်းပညာခ၇ီးသည်ဆိုက်သည် Domail ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပါမည် www.km2amsc .co.vu နဲ.ဖြစ်သွားမှာပါ သို...
mp3တွေကို ကိုယ်ဖြတ်ချင်သလို ဖြတ်တို့ရတဲ့ MP3 cutter full version (2MB)
mp3 သီချင်းတွေကို ringtone ဖြတ်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချို့နေရာတွေက ကြော်ညာတွေပါနေလို့ ဖြတ်တောက်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် mp3cutter ဆော့ဝဲလ်ေ...
http://www.km2amsc.co.vu/2012/12/gtalk-3_3655.html http://www.km2amsc.co.vu/2012/12/g-talk-g-mail.html http://www.km2amsc.co.vu/2012/1...
:ဥပဒေအဘိဓာန် Version :1.0 Size : 3.17MB Format : Apk O/S : Android ဥပဒေ အဘိဓာန်တွင် စကားလုံးပေါင်း ၃၂၀၀ ကျော် ပါရှိပါတယ်။ ဥပေ...
CD, DVD အခွေရဲ့ Cover ပုံ အလန်းလေးတွေ ဖန်တီးတဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးဖြစ်ပါတယ်
RonyaSoft CD DVD Label Maker ကတော့ CD, DVD အခွေရဲ့ Cover ပုံ ကို မိမိ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုး နဲ့ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ အသုံးပြုရ...
သုတစုံလင်ဗုဒ္ဓဝင် ပြိုင်ပွဲဝင် ကျောင်းသူ/သား များအတွက် အထူးလေ့လာစေလိုသော စာအုပ်မျာ;
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ၁။ စာအုပ်များအား မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ ၂...
Windows XP ချစ်သူများအတွက် Go Launcher Ex Theme Windows APK
ဒီတစ်ခါတော့ Go Laucher Ex Theme ဝေမျှပါဦးမယ်။ Windows XP ချစ်သူတွေတွက် အထူးဝေမျှပေးခြင်းပါ။ ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်လို့စမ်...
Internet Download Manager ရဲ့ အများဆုံး ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်း
Internet Download Manager သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ ကြုံနေရတဲ့ စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်ရပ်လေးပါ .. IDM နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်အပ...
TSF Shell v2.0.1 (3D စတိုင်လေးနဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ Android Laucher လေးပါ။
December 14, 2013 ရက်နေ့က အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Laucher လေးဖြစ်ပါတယ်။ 3D စတိုင်လေးနဲ့ အရမ်းလန်း ပါတယ်။ တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ Laucherေ...
Facebook အကောင့် Hack မခံရအောင်ကာကွယ်ပေးမယ့် FB Phishing Protector
Phishing Attack ဆိုတာ ၀က်ဆိုက် Login Page အတုတွေ ကို အသုံးပြုပြီးသင့်အကောင့် Username , Password တွေကိုခိုးယူတဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အီ...
နည်းပညာခ၇ီးသည် ကိုလတ် http://km2amsc.blogspot.com ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကိုလတ်နဲ.ဆက်သွယ်ချင်၇င်km2amsc@gmail.com အဆင်ပြေပါစေနော် အနာဂတ်နည်းပညာဘဏ်
ကျနော်ဆိုက်ကို အောက်ပါလင်.များမှာမိမိကြိုက်နှစ်သက်သောလင်.ကနေ တိုက်၇ိုက် ၀င်ေ၇ာက်နိုင်ပါသည် နည်းပညာခ၇ီးသည်
"မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ နည်းပညာလမ်းကြောင်းပေါ်က သူငယ်ချင်းများ ကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ နည်းပညာခ၇ီးသည်ကို လာေ၇ာက်လည်ပတ် လေ.လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ˜*•. ˜"*°•.˜"*°•.˜"*°•.•°*" ˜.•°*"˜.•°*"˜ .•*˜ ခင်မင်ရင်းနှီးရပါသော… "မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ နည်းပညာလမ်းကြောင်းပေါ်က သူငယ်ချင်းများ ကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ km2amsc.blogspot.com ကို လာေ၇ာက်လည်ပတ် လေ.လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ˜*•. ˜"*°•.˜"*°•.˜"*°•.•°*" ˜.•°*"˜.•°*"˜ .•*˜ ခင်မင်ရင်းနှီးရပါသော"
လိ(ဒ်) ဂစ်တာ တီးခတ်နည်း စာအုပ်
၅ ဘာသာ စကားပြောနည်း စာအုပ်
English To Myanmar & Myanmar To English Dictionary...
Internet Download Manager ( ဘာမှထည့်စရာမလိုဘဲ ဖူြး...
Critical Missions: SWAT Full Version -APK ဂိမ်း
MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.7 SilenT
Channel7-Myanmar လိုင်းလေးကို Androidတွင်ကြည့်ရှု့န...
ဝေဟင်မှာစစ်ခင်းချင်တယ်ဆိုရင် Red Warfare 2.0.2 APK...
ဖုန်းဆက်တဲ့သူရဲ့ တည်ရာကို ပြတဲ့ Cell Tracker for A...
window7တင်နည်း (pdf)
ဈေးသက်သာ ၆.၁ လက်မ အရွယ်ဖုန်း Huawei ကထုတ်၊ iPhone...
စာလုံး ဒီဇိုင်း ရေးနည်းလေး
Computer အထမနှေးစေရန် ပြင်ဆင်ခြင်း
cFosSpeed 8.03 Beta
Thank You For Being My Friend.....ကျေးဇူးပါသူငယ်ချ...
ကိုယ့်စက်ထဲကနေ ဖိုင် ဖိုဒါတွေကို google Documents ...
Windwos alesraa Xp 2012 November 2012 | Single Iso...
Android အတွက် English-Myanmr ဘာသာပြန်တဲ့ word find...
Windows Xp SP3 "highly compressed9mb" + full ver...
Desktop ၏ Graphics Performance ကိုတင်နည်း
My Computer ကိုမြန်မြန်ပွင့်အောင် လုပ်နည်း
Error Report ကိုပိတ်ထားခြင်း
Direct X 10 for Windows XP | Full Version |4MB
WINDOWS XP+SUPER HIGHLY COMPRESSED
window မှာ အသင့်ပါလာတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ဖြုတ်ပြီး စက်က...
ဘာမှ Install မလုပ် Format မချပဲ service pack တွေေ...
Must Have Windows XP Live CD + Tools | 547 MB
Copyright © နည်းပညာခ၇ီးသည် | မှုပိုင် အောင်ကိုလတ် | free css templates | Free PSD Files